နယူးဇီလန် - ဆုငွေဖောင်ဒေးရှင်း
နယူးဇီလန်တွင် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ သို့မဟုတ် အခြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏အွန်လိုင်းတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ကို ကန့်သတ်ရန် လောလောဆယ်တွင် အသက်စစ်ဆေးသည့်စနစ် မရှိပါ။
သို့သော်လည်း နယူးဇီလန်အစိုးရသည် လူငယ်များ၏ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်သည် ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည်။ New Zealand Classification Office မှ 2019 ခုနှစ်တွင် သုတေသနပြုလုပ်ပြီးနောက် ခြေလှမ်းများ လှမ်းခဲ့သည်။ ဒါကို ဖြေရှင်းဖို့။ အသက်အရွယ်ကို စိစစ်ခြင်းသည် အစိုးရ၏ ပထမဆုံးရွေးချယ်မှု မဟုတ်ပေ။ အိမ်သုံးအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုများတွင် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို ပိတ်ဆို့ရန် 'ဖယ်ထုတ်ခြင်း' စစ်ထုတ်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အစား အလုပ်စတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဤအဆိုပြုချက်သည် ပါတီစုံထောက်ခံမှု မရခဲ့ပေ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မတိုးတက်ခဲ့ပါ။
နယူးဇီလန် အစိုးရက ယခု ကြေငြာချက်တစ်ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အကြောင်းအရာစည်းမျဉ်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။. ဤအရာသည် ကျယ်ပြန့်ပြီး အသက်အရွယ်စိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ New Zealander ၏ အကြောင်းအရာဝင်ရောက်ခွင့် အခွင့်အရေးများကြား ပိုမိုကောင်းမွန်သော ချိန်ခွင်လျှာကို ရရှိနိုင်သော ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ထိရောက်မှုရှိသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဆီသို့ တိုးတက်မှုကို အသိပေးရန် သုတေသနပြုထားသည့် သုတေသနကို ရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ .
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ချိန်ခွင်လျှာကို အောင်မြင်ရန် လိုအပ်သည်ဟူသော အယူအဆအတွက် သိသာထင်ရှားသော အထောက်အပံ့များ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ အမျိုးအစားခွဲခြားရေးရုံးသည် အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်အရွယ်များကို သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသား လူငယ်များသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းတွင် ကန့်သတ်ချက်များ ရှိသင့်သည်ဟု ယူဆကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ 14 နှစ်အောက်ကလေးများသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရန် အဆင်မပြေကြောင်း (17%) လူငယ်များ တခဲနက်သဘောတူခဲ့ကြသည်။ အများစု (89%) သည် ကလေးများနှင့် ဆယ်ကျော်သက်များ၏ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ကန့်သတ်သင့်သည်ဟု ယုံကြည်နေသော်လည်း၊
အဆိုပါ ကျယ်ပြန့်သော ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကို ဆိုင်းငံ့ထားပြီး၊ အခြားနယ်ပယ်များတွင် သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်မှုများ ရှိနေပါသည်။ အများသူငှာ သတင်းအချက်အလတ် လှုပ်ရှားမှုများ ပါဝင်ခြင်း။ "ညစ်ညမ်းသရုပ်ဆောင်များ" ပြဿနာများကို အသိပညာနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှု မြှင့်တင်ရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဆက်ဆံရေးနှင့် လိင်စိတ်ပညာပေးခြင်းဆိုင်ရာ နယူးဇီလန်ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ယခုအခါ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ New Zealand Classification Office သည် လက်ရှိတွင် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆရာများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်စေရန် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။